Zidane Oo Murugeysan Inkasoo Uu Badiyay El Clasico & Musiibo Hor Leh Oo Soo Gaartay Real Madrid Ka Hor Kulanka Liverpool - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaZidane Oo Murugeysan Inkasoo Uu Badiyay El Clasico & Musiibo Hor Leh Oo Soo Gaartay Real Madrid Ka Hor Kulanka Liverpool
Zidane Oo Murugeysan Inkasoo Uu Badiyay El Clasico & Musiibo Hor Leh Oo Soo Gaartay Real Madrid Ka Hor Kulanka Liverpool
April 11, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Real Madrid ayaa la kulantay dhaawac kale oo dhanka daafaca ah iyaga oo isku diyaarinaya in ay u safraan Anfield lugta labaad ee wareega 8 dhamaadka Champions League ee ay la leeyihiin Liverpool.
Los Blancos ayaa ku badisay 3-1 kulankii lugtii hore ee Talaadadii, iyadoo Vinicius Junior iyo Marco Asensio ay seefta mariyeen kooxdii taxadar la’aanta ku soo booqatay.
Zinedine Zidane ayaa waxaa ka maqnaa dooqa koowaad ee daafaciisa ee Sergio Ramos iyo Raphael Varane lugtii hore, taasoo la micno aheyd in Nacho iyo Eder Militao ay buuxinayeen booskooda.
Kabtan Ramos ayaan ka soo kabsan doonin dhaawicii kubka ka hor lugta labaad, halka ku lug lahaanshaha Varane uu sidoo kale shaki ku jiro ka dib markii uu ku dhacay Korona Fayras
Waxaad saaid ku ah dhibaatada daafaca Real Madrid, Lucas Vazquez oo garoomada ka maqnaan doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, waxaana uu seegi doonaa safarka ay ku tagayaan kooxda heysata horyaalka Premier League.
In kasta oo uu yahay garab weerar ah, haddana laacibka reer Spain waxa uu xilli ciyaareedkan intiisa badan ku qaatay daafaca midig sababo la xiriira dhaawacyada joogtada ah ee Dani Carvajal.
Vazquez ayaa lagu bilaabay kulankii La Liga ee ay la ciyaareen kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona habeenkii sabtida, waxaana lagu qasbay inuu garoonka ka baxo ka hor qeybtii hore iyadoo looga shakisan yahay dhibaato jilibka ah ka dib markii ay isku dhaceen Sergio Busquets.
Maanta, kooxda Isbaanishka waxay xaqiijisay in Vazquez uu soo gaaray dhaawac jilibka ka dib markii ay bayaan ku daabaceen boggooda.
“Ka dib baaritaano lagu sameeyay Lucas Vazquez oo ay sameeyeen dhaqaatiirta Real Madrid, waxaa lagu ogaaday inuu qabo murgacasho jilibka bidix,” ayaa lagu yiri bayaanka. “Soo kabashadiisa waa la qiimeyn doonaa”
Warka ku saabsan dhaawaca 29 jirkaan ayaa soo xulashada Zidane ka dhigeysa mid jahwareer ah, tababaraha reer France ayaa murugeysan inkastoo kooxdiisa ay 2-1 ku badisay El Clasico.